Caali-baasiin mana Maandellaan itti hidhame keessa buluu haqame - BBC News Afaan Oromoo
Caali-baasiin mana Maandellaan itti hidhame keessa buluu haqame
Goodayyaa suuraa Pirezedaantii Duraanii Afirkaa Kibbaa Nilsen Maandellaa, mana hidhaa keessatti
Afriikaa Kibbaatti gareen mana hidhaa Maandellaan keessatti hidhame kan Odola Roobiin keessatti argamtu keessa alkan tokko buluuf caali-baasii qopheessan marsariitii isaaniirraa hanquun isaanii dhaga'ameera.
Dhaabbanni tola oolaa tokko ka'umsa dolaara 250,000 ta'een namoota 67 alkan tokkoof bakka Maandellaan eegumsa addaa cimaan waggoota 27'f keessatti hidhamee ture kana keessa bulaniif caal-baasiitti dhiyeessee ture.
Amma garuu dorgomtoonni caalii baasii carraa Qonna Liiliyesliif kan qabeenya Maandellaa ta'e keessatti akka dabarsaniif yaada jijiireera.
Bakki qonnaan kunis namoota hanga 400 al takkaatti keessumsiisuu kan danda'u yommuu ta'u ka'umsa caali-baasii kanaa Dolaara 11,000 ta'a jedhameera.
Qophiin kun garee dhaabbata CEO Sleepout jedhamuun bara 2013'tti waggaa 95 irratti kan boqotan Maandellaan osoo jiraateera ta'e waggaa 100 itti guutuu danda'u yaadachuuf qophaa'e.
Caal baasiin kun guyyaa dhaloota isaa dursee gaafa Adoolessa 17 waarii irratti cufama jedhameera.
Hanga ammaattis caal-baasiin kana waliin walfakkaatu gaggeeffamee hin beeku.
Maandellaan tarkaanfii Afriikaan Kibbaa sirna loogiidhaan guutama kan Apartaayidii dhaabuuf taasifteen bara 1990 mana hidhaatii ba'e. Adeemsi sirna loogiin guutame sun bara 1994tti yeroo Maandellaan Pirezedaantii gurraachaa isa jalqabaa ta'uun filatameen boodadha.
Maallqani caali-baasii kanaan argame gariin garee US akka hidhamtoonni carraa barumsaa yuunvarsiitii uummataa keessatti akka argataniif hojjetuuf akka kennamu, CEO Sleepout dubbateera.
Hanga ammaatti dorgomtoonni caali-baasii kanaa sadii akka galmaa'an marsariitii dhaabbta tola oolaa kanarratti barraa'eera.